လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားမှ ပိုအရသာရှိတယ်တဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားမှ ပိုအရသာရှိတယ်တဲ့လား
Posted by etone on Jan 28, 2011 in Food, Drink & Recipes, My Dear Diary | 52 comments
သတ္တ၀ါအပေါင်း ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ ကြပါစေ။
ရွာသူရွာသားတို့ရေ … သတ်သတ်လွတ်စားတာ ၊ မစားတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဟိုးတလောက တော်တော်လေးပွဲဆူသွားခဲ့တယ်နော်…။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့အတွေ့ကြုံလေးတစ်ခုကို ပို့စ်တင်မယ် စဉ်းစားထားပြီး မတင်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီ ။ မနေ့ညကမှ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးပြန်တွေ့တော့.. တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…။
ည ၇ နာရီ ကို ရွှေဂုံတိုင်နားက ကေပါရာဒိုက်ဟော်တယ် ဘေးက စားသောက်ဆိုင်မှာ ဆုံမယ်လို့ ကျမတို့ GM ကပြောပါသည် ။ ဂျာမဏီကလာသော အထူးဧည့်သည်လည်းပါမည် ၊ စက်ရုံပိုင်ရှင် ကျမတို့ boss လည်းပါမည် ၊ GM လည်းပါမည် ။ ကျမတို့နဲ့ အလုပ်အတူလုပ်နေသော မန်နေဂျာတစ်ယောက်လည်း ပါမည်ပေါ့ … ။ စုစုပေါင်း ငါးယောက် ညစာစားဖို့ချိန်းထားပါတယ်…။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပြောကြဆိုကြရင်း ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကိုလည်း ဒင်နာလိုက်ကျွေးတယ်ပေါ့… ။ အဲ့ဒီအချိန်တုံးက ကေပါရာဒိုက် ဟိုတယ် ထဲမှာ ကျောက်မြတ်ရတနာ ပြပွဲ၊ ကျောက်စိမ်းလေလံပွဲ လုပ်လို့ လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေတည်းခိုနေတာ သိခဲ့ရခဲ့သည် ။အများစုမှာ တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး အခန်းအပြည့် ငှားရသောကြောင့် လူ အသွားလာ စည်းကားနေသည် ။
တခြားနေရာတွေမှာ ဒင်နာစားဖူးခဲ့ပေမဲ့ ယခုကဲ့သို ဟိုတယ်က ဆိုင်တွင်တော့မဟုတ် ။ ကျမအတွက်နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သည့်နေရာမျိုးပါ…။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကျမ ဒီဟိုတယ်ဝင်း ထဲဝင်သွားတာတွေ့လျှင် ဘယ်လိုထင် မည် မသိ ။ မသွားလို့ကလည်း မဖြစ်ဘူးလေ လူကြီးတွေလည်း ပါမှာကိုး … ။ ရှိစုမဲ့စု စိတ်ကိုတင်းပြီး ကျမ ဟိုတယ် ၀င်းထဲဝင် ၊ ဘေးက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်သို့ ၀င်သွားခဲ့သည် ။
ဟော… တွေ့ပါပြီ အားလုံး လူစုံနေပြီ ။ ကျမ အနည်းငယ်နောက်ကျသွားသည် …။ အားလုံးက ဘာမှမမှာထားသေးပဲ ကျမကို စောင့်နေမှန်းသိသိချင်းတောင်းပန်ပြီး ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။ မြန်မာဆိုလို့ ကျမနဲ့ မန်နေဂျာနှစ်ယောက်ပဲ ရှိပါသည် ။ တခြားသုံးယောက်မှာ ဧည့်သည်က ဂျာမဏီလူမျိုး ၊ ဘော့စ်နဲ့ ဂျီအမ် က ကိုရီးယားလူမျိုးများဖြစ်သည် ။ ကျမတို့ ဘော့စ်ကရွှေးသောဆိုင်ဖြစ်သဖြင့် မလာချင်ပဲ လာခဲ့ရသည် ။ လူစုံတော့ အော်ဒါစမှာရတော့မည် ။ ၀ိတ်တာကို လိုက်ရှာမိသည် … ။ ၀ိတ်တာနှင့်တူသောသူ မည်သူမှ မတွေ့ပေ ။ ထူးဆန်းသည်မှာ အနက်ဝမ်းဆက်အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံဝတ်ထားသော မြန်မာ အမျိုးသားလူငယ်များ နှင့် အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံ မီနီစကပ်ပေါင်တို ၀တ်ထားသော အမျိုးသမီးများ ပျားပန်းခတ်မျှ စည်ကားသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်…။ ဝေါကင်းတော်ကီလိုဟာမျိုး ကိုင်ထားကြသေးသည် ။ ကျမစိတ် ထဲ နိုင်ငံခြား အက်ရှင်ကားများကြည့်နေရသလို တောင်ဖြစ်လာမိသည် ။ ဧည့်သည်တွေ များနေလို့ လုံခြုံရေးချထားတာလည်းလို့လည်း မဆီမဆိုင်တွေးမိသည် ။ နောက်မှ သိလိုက်ရခြင်းက ထို လူများမှာ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှ ၀ိတ်တာများနှင့် ၀ိတ်ထရပ်စ်များ ဖြစ်ကြသည် ။ တော်တော် အဆင့်မြင့်ပါလားလို့တောင် ထင်မိလိုက်သည် ။ အစားသောက်တွေမှာမည် menu ပေးလို့တောင်းတော့ … ကိုယ်တိုင် လိုက်ရွေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီး ၀ိတ်ထရပ်စ် မိန်းမက ပြောပါသည် ။ ဘော့စ် နဲ့ ဂျာမဏီက ဧည့်သည် နှစ်ဦးက ဟင်းသွားရွှေးမည် ကျမကို လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်သောကြောင့် မယောင်မလည်နှင့် အနောက်ဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါသည် ။ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းနေသည်မှာ အမှန်ပင် ။ စားသုံးသူကို ကိုယ်တိုင်ရွေးပါဟုပြောသော ဆိုင်သို့ ကျမ ပထမဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းပါ ။ s
elf service ဆိုင်တွေနဲ့တော့ မတူပါဘူး … ။ စိတ်ဝင်တစား ကုတ်ချောင်းချောင်း အနေထားနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်နောက်က လိုက်လာတော့ ငါးကန်လို အကြီးစားမှန်ပုံးတွေ တွေ့ပါသည်… ။ အလှမွေးငါးကန်လည်းဖြစ်ဟန်မတူပါဘူး… အလှကြည့်စရာနေရာမှာ ထားတာမှမဟုတ်ပဲကိုး …။ မှန်ပုံး ဆယ်ပုံးထက်မနည်းထားတာတွေ့ပါတယ်… အရှည် လေးပေးလောက်နဲ့ အမြင့်နှစ်ပေခွဲသုံးပေလောက်၊ ဗျက်အကျယ်ကတော့ နှစ်ပေလောက်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသည် ။ ထို မှန်ပုံးထဲတွင် ကမာကောင်လေးများ ၊ ပုဇွန်များ ၊ ကဏန်းများ ၊ ရေခူများ ၊ ဂျယ်လီဖစ်ရ်ှများသာမက ငါးအမျိုးမျိုးကိုလည်း သူ့ ကန်နှင့်သူ ထည့်သွင်းမွေးမြူထားကြောင်းသိရသည် …။ အံမယ် တယ်ဟုတ်ပါလား ငါးကန်ကလည်း အစုံပါပဲ ဆိုပြီး တအံ့တသြ ကျမလျှောက်ကြည့်နေစဉ် .. ၀ိတ်တာကောင်လေးတစ်ယောက် စာရွက်လေးနဲ့ ဘောပင်လေးကိုင်ပြီး ဘာများသုံးဆောင်ချင်ပါသလဲလို့ မေးလာပါတယ်… ။ ကျမတို့ ဘော့စ်နဲ့ ဧည့်သည်က သူတို့စိတ်တိုင်းကျ ရေထဲမှ သတ္တ၀ါများကို ရွေးပြီး ကျမကိုလည်း ရွေးခိုင်းပါသည်…..။ အ ရမ်းကို အံ့အားသင့်ခြင်းများနှင့်အတူ ၀မ်းနည်းလာသလိုလို ခံစားလိုက်ရသည် ။
ဘာကိုမှစားချင်စိတ်မရှိတော့ပါ…. ကန်ထဲက သေရတော့မည့် သတ္တ၀ါလေးတွေကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်များ ဝေ့တက်လာသည် …။ မကြာခင်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ငိုမိတော့မည့်အဖြစ်ကို ဧည့်သည် ဂျာမဏီလူမျိုးက ရိပ်စားမိပြီး …. မန်နေဂျာ ကို သွားခေါ်ပြီးရွေးခိုင်းစေတာကြောင့် ကျမစားပွဲမှာ ပြန်စောင့်နေခဲ့ရတော့သည် ။ ထိုနေ့ညက ဒင်နာ ကျမအတွက်တော့ အော့နှလုံးနာစရာဖြစ်ခဲ့သည် ။ မျိုချ၍ ပင် မရသဖြင့် … သစ်သီးနှင့် ၀ီစကီကိုပဲ မဲပြီးသောက်နေမိသည် …။ အိမ်သာဘက်ကိုသွားသလိုလိုနဲ့ … တခြားသတ္တ၀ါတွေများ ရှိမလားလိုက်ရှာမိသည် …။ တခြား ငှက်တွေ ၊ ဇီးကွက်တွေ၊ မျောက်တွေလည်းရှိပါသည် …။ လှောင့်ချိုင့်များဖြင့်နေရသည် ….။ အခွံမာ ပိုးကောင်တွေ လည်း ရှိကြောင်းတွေ့ရသည် …။ သူတို့ခဗျာ သေရမဲ့ရက်ကို အကျယ်ချုပ်ကျခံရပြီး စောင့်ဆိုင်းနေရသည်မှာ သနားစရာအလွန်ပင်ကောင်းသည် ။ တစ်ချို့သတ္တ၀ါများမှာ သေတော့မည်ကို သိသည့်လား ၊ နားလည်သည်လား မပြောတတ် … မင်သေသေမျက်လုံးများနှင့် လှောင်ချိုင့်ထဲကနေ ကျမကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပြန်ကြည့် နေတတ်သည် …။ ထိုမြင်ကွင်းများက ကျမရင်ထဲကို တူးစွနေသလိုပင် နာကျင် ခံစားခဲ့ရသည် ..။ သနားစရာ သတ္တ၀ါလေးများအတွက် ကျမလုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိခဲ့သော်လည်း … ကောင်းရာသုဂတိလားစေဖို့သာ ဆိုတောင်းပေးခဲ့ရသည် ။ သုံးနာရီလောက်သောက်ပြီး အိမ်သိုပြန်ခဲ့သည် ……။
ထိုနေ့ညက တော်တော်နှင့်အိပ်မရ …၀ီစကီတန်ခိုးကပြတော့ လူကနည်းနည်းထွေပြီး အာခေါင်းတွေခြောက်လာသည် … အတွေးတွေ ရောထွေးနေသည် …။ သနားစရာ အကောင်လေးများကိုလည်း မျက်လုံးထဲပြန်မြင်ယောင်လာမိသည် ။ တတ်နိုင်သမျှ အသားစားခြင်းကို လျှော့ချရှောင်ကြဉ်တော့မည်ဟုလည်း စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည် ….။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် လပိုင်းခန့် သတ်သတ်လွတ်ချည်းပဲ စားဖြစ်သည် …။ သတ်သတ်လွတ်စာခြင်းကြောင့် ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းသော်လည်း ကရိကထပိုများသည် ဟုထင်သည် ။ (အမြဲ ရုံးတက်နောက်ကျတတ်တဲ့ ကျမအတွက် မနက်မိုးလင်းထ ကြော်လှော်ရတာ အလျှင်မမီသောကြောင့်) သတ်သတ်လွတ် ရယ်ဒီမိတ်ဆီသွပ်ဗူးများ ဈေးကွက်ထဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရှာမတွေ့ခဲ့ ။ သာရေးနာရေး သွားလျှင်လည်း သတ်သတ်လွတ်ကြောင့် သူများအလုပ်ရှုပ်ကြသဖြင့် နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားပြန်သည် …။ အသားစားခြင်းကို မလွဲမရှောင်သာ အချိန်မျိုးမှာစာမည် သို့သော် အနည်းငယ်မျှသာ …။ အသီးရွက်ကိုပင် အဓိကထားစားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် …။
ကျမတို့အိမ်နားမှာ တရုတ်ဆီးဖု စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လာဖွင့်ကြောင်းသိရသည် … ။ ညဘက်ပြန်ရောက်ချိန်မိုးချုပ်တော့ ကျမပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆက်သွယ်ပြတ်နေသည် …။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဘယ်သူလည်း မသိ ၊ ဘယ်တုန်းက အဲ့ဒီဆိုင်လာဖွင့်လည်းမသိ..ပြင်ဆင်နေတာတောင် မသိလိုက်…။ ယခုဖွင့်တော့မှ မီးတွေဘာတွေထွန်းထားမှ ဆိုင်ဖွင့်ပါလားသိတော့သည်… ။ စပ်စုစိတ်က အရင်းခံမို့… မယောင်မလည် ဆိုင် ရှေ့က အဖြတ် … မျက်စိနှစ်လုံးနဲ့ မွှေနှောက်ကြည့်တော့… ငါးပုံးတွေ ၊ ပုစွန်ပုံးတွေတွေ့ပါသည်… … ကေပါရာဒိုက် ဆိုင်နဲ့ အလားတူဆိုင်မျိုးဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည် …။ ဆီးဖုဟုရေးထားသောကြောင့်…ကျမခန့်မှန်းတာလွဲမည် မထင်…။
လူတွေ လျှာပေါ် ရောက်လာမဲ့ တဒင်္ဂ ရသာအာရုံလေးကြောင့် သူတပါး အသက်ကို မငဲ့ညာ စားဝါးနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ။ အသားငါး မစားရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး… စားချင်တဲ့လူစားပါ ၊ မစားချင်တဲ့လူလည်း မစားပဲ နေပါ … ဒါက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွှေးခြယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်… ကျမပြောချင်တာက ကိုယ့်ပရောဂကြောင့် သေတာမဟုတ်ရင် ပြီးတာပါပဲ … ကိုယ်စားမယ်ဆိုမှ သတ်ပြီးချက်ချင်းချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းမျိုးကိုတော့ … ဘယ်လိုမှ စားလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး…။ ထိုနေ့မှစပြီး ကေပါရာဒိုက်မှာ ကျွေးမယ်လုပ်တိုင်း ကျမပွဲဖျက်ပြီး အိမ်မှာပဲ နေပါတော့သည် ။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြပါစေ ။ ။
ကြားသား ၊ မြင်သား ထက် ဆိုး ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် သတ်စားနီးပါး ပါ ဘဲ။
etone လို ဘဲ လူ သား အား လုံး သတ္တ၀ါ တွေ အပေါ် အကြင်နာ ထား၊ မေတ္တာ ပွား နိုင်ကြပါစေ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က .. အသက်ကို လူတွေလုပ်နိုင်တဲ့ သတင်းတခုဖတ်လိုက်ရတယ်..။
ရုပ်ရယ်၊နာမ်ရယ်လို့ရှိရာမှာ .. တကယ်တော့ ..သက်ရှိတကောင်ဟာ ..ကွန်ပျူတာတလုံးနဲ့ သဘောသိပ်မကွာပါဘူး..။
နောက်ပိုင်း..ဘိုင်အိုစိပီယူတွေထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် … သက်ရှိဆိုရင်တောင် လူနဲ့ပိုတူ..ဒါမှမဟုတ် ..ပိုကောင်းတဲ့ဥိးနှောက်နဲ့အကောင်တွေထွက်လာတော့မှာပါ…။
ရုပ်ဆိုတဲ့..ဘိုင်အိုကွန်ပေါင်းလေးက ..ကွန်ပျူတာမှာ .. စီလီကွန်ပြားပေါ်က ..ထရန်စစ်စတာလုပ်ထားတဲ့.. စီမီးကွန်ဒပ်တာအစကလေးပေါ့..။
နာမ်ဆိုတာက .. အဘိဓမ္မာမှာတော့ ..ဥပါဒ်၊ဌီ၊ဘင်တဲ့..ဖြစ်ရပ်ပျက်ပေါ့လေ…။ သုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်..။ ရုပ်ကော၊နာမ်ရောက ဖြစ်တဲ့နေရာတင်ပဲ..ပျက်ပါတယ်..။ ရွေ့ လို့မရပါဘူး..။
ထရန်စစ်စတာမှာတော့ .. ဖွင့်ပိတ်၊ (သုံည၊တစ်) ၂မျိုးပဲသုံးတယ်..။ သူလည်းရွေ့ လို့မရပါဘူး..။ လော့ဂျစ်နဲ့သာ စာလုံးတွေ..ပုံတွေကို ပညက်တာပါ..။ သုံညတစ်အတွဲတွေနဲ့ပေါ့..။ အတွဲတွေတော့ ဘစ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့..။
အဲဒီလို ထရန်စစ်စတာ မီလီယံချီပြီး … တွဲအလုပ်လုပ်ရင်.. နာမ်တွေလိုပဲ.. အခုမြင်ရတဲ့..အင်တာနက်ရော..ကွန်ပျူတာရော..သရီဒီရော..။ အကုန်လိုလို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ရသွားတယ်ပဲ.. လွယ်လွယ်ပြောပါစို့..။ အဲဒါကြောင့် ဒစ်ဂျစ်ဆိုတာ .. သုံည၊တစ်အတွဲကိုခေါ်တာလို့ ပြောကြတာပါ..။
ဒီခေတ် အိုင်၇ စီပီယူဟာ .. လူဦးနှောက်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမြန်ပါတယ်..။ တခုထဲစွမ်းဆောင်ရည်က ..လူဦးနှောက်ထက်လည်း ပိုမို တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်..။
လူဥိးနှောက်က .. ပန်တီယမ် ၃၈၆ထက်တောင်ညံ့တယ်ပြောကြတယ်..။ ဒါပေမဲ့.အဲဒါမျီုး စီပီယူအစုတ်ပလုပ်လေးတွေ..မီလီယံချီပြီး တွဲစက်တည်ဆောက်ထားတာလို့ပြောကြပါတယ်..။
သဘောက ..အညံ့စားကွန်ပျူတာ .. မီလီယန်ချီ တွဲအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့..။ အဲဒါကြောင့် လူဦးနှောက်က .. ပိုကောင်းသလိုဖြစ်နေတာပါ..။
ဒါပေမဲ့..သာမန်အားဖြင့် လူတွေဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း အလုပ်မလုပ်ကြပါဘူး..။
အပေါ်ဆုံးမှာ ရေးခဲ့တဲ့..ဘိုင်အိုအင်ဂျင်နီယာရင်းနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ .. အသက်ရယ်..။
အခု.. ကျွန်ပျူတာရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စံနစ်ရယ်ကို .. ဘိုင်အိုကွန်ပေါင်း(အသားတု)နဲ့ လုပ်နိုင်ဖို့ခေတ်ဟာ မဝေးတော့ပါဘူး..။
တကယ်တော့ ..အသက်ဆိုတာ.. ဖန်တီးယူလို့လည်းရနေပါပြီ..။
သတ်တယ်..သေတယ်..ဖန်တီးတယ်..ပြန်ဖြစ်တယ်..ဆိုတာတွေက သိပ်အဆန်းမဟုတ်တဲ့.. သဘောတွေပါ..။
အခုခေတ်..လေးထောင့်ခရမ်းချဉ်သီးလို .. အစေ့မပါတဲ့..ချိုမြိန်လှတဲ့ ဘလက်ဘယ်ရီသီးလို…
ခေါင်းမပါပဲ.. အသက်ရှင်နေတဲ့ ကြက်ကို ..စားသောက်ဆိုင်မှာ .. လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်.. စားသောက်ဖို့ရက် မဝေးတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်..။
အဲ..ခေါင်းမပါပေမဲ့..အသားတွေ လတ်ဆတ်နေအောင်တော့ … အသက်သွင်းပေးထားမယ်ပေါ့နော..။
ဆိုတော့.. ငါးဆိုလည်း ..ရေထဲ..ဦးနှောက်မရှိပဲ..လှုပ်နေတာမျိုးပေါ့..။
စားကြမလား..လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်…. အသား..။ သက်သတ်လွတ်(အသက်သတ်ခြင်းမှ..ကင်းလွတ်)ပါတယ်..။
အသက်ကို မရှိတာ..။ ဒါပေမဲ့..ရှင်နေတဲ့အကောင်လေ…။
အင်း…..ကိုခိုင်အတွက်တော့ ဓါတုဗေဒဆေးဝါးတွေမပါတဲ့ နောက်ထပ် အော်ဂင်းနစ် အသီးအနှံတွေ ထပ်ပို့ပေးအုံးမှပဲထင်တယ်။
နောက်ဆိုရင် အသက်မပါတဲ့ မိန်းမ စားပွဲထိုးတွေ၊နိုက်ကလက်မယ်တွေပါ ထွင်တော့ မယ်နဲ့တူတယ်။
US ရှိနေပြီဆိုရင် အသိပေးအုံးနော်။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ ပထမဦးဆုံး Import သွင်းတဲ့လူဖြစ်ချင်လို့ပါ။။
တကယ်တော့ .. အဲဒီအစေ့မပါပဲ.. ချိုနေတာတွေက … ဓါတုဆေးဝါးတွေနဲ့လုပ်တာတော့ မဟုတ်ဖူးဗျ..။
သူတို့က .. ဘိုင်အိုနည်းနဲ့ပဲလုပ်တာ…။ အပင်ရဲ့ ..အော်ရီဂျင်နယ်.. မျိုးရိုးဗီဇကို ပြင်လိုက်တာ..။
ဥပမာ ..ကြောင်ကို .. ကြွက်ဒီအန်အေထည့် ပြီး မျိုးစပ်တာမျိုးပေါ့..။
ဒီနည်းတွေက .. ထာဝရဘုရားသခင်လက်ခံတဲ့ ..ရှေးရိုးစွဲဘာသာေ၇းသမားတွေကတောင် လက်မခံနိုင်ဘူး.။
ပြီးတော့ ..ပေါက်တပ်ကရတွေဖြစ်တတ်မှာမို့ .. ဥပဒေနဲ့အသည်းအသန်လိုက်ထိမ်းချုပ်ထားတာ..။
genetic engineering ပေါ့လေ..
ဘုန်းဘုန်းတပါးက မနက်စောစော သူ့ကျောင်းရှေ့မြစ်ထဲမှာလှေတစင်းတွေ့တော့လှမ်းမေးတယ်၊ဟေ့ဘာလှေလဲဟေ့ဆိုတော့ ဒကာက ကျွန်းလှေပါဘုရားလို့ဖြေတယ် ဒါတော့သိတာပေါ့ခွေးမသားဒကာရဲ့ ငါသူများအသက်သတ်တာမကြိုက်ဘူးငါ့ကျောင်းရှေ့ငါးလာမဖမ်းနဲ့။ နောက်တနေ့အဲဒိ ဒကာအိမ်အာရုံဆွမ်းအုပ်အလှည့်ကျတော့ဆွမ်းအုပ်ထဲ ရေတွေကြီးထည့်ပေးလိုက်လို့ဘုန်းဘုန်းအာရုံဆွမ်းမဘုန်းရဘဲဒေါသမီးဟုန်းဟုန်းတောက်သတဲ့ဗျ။(ကျနော်တို့ရွာမှာပါ)
ကောင်းပါတယ် မအိတုံ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ခဏခဏ ကြုံတွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ တော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊ သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်၊ ငါမစားဘူးပေါ့။ တခြားဟာစားမယ်ပေါ့။ပင်လယ်စာတို့ ငါးတို့ကတော့ အရှင်ကိုချက်မှ ပိုကောင်းတယ်ကြားဖူးပါတယ်။ မစားဖူးလို့ မသိပါ။ သက်သက်လွတ်ကတော့ မစားနိုင်သေးပါ။ ကရိကထများတာလဲပါပါတယ်။
ကိုရီးယား boss က ခွေးထီးအရှင်ကိုလက်ညိူးထိုး ပါတဲ့ ၂ လုံးကိုဖြုတ် SOJU ဆိုတဲ့အရက်နဲ့တွဲပြီးသောက်ချင်တယ်မပြောလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာ(လတ်ဆတ်တဲ့အစိမ်းကိုနော်)၊တယ်အားရှိဆိုဘဲ။သူတို့ဆီမှာအဲ့သလိုသောက်ကြသဗျ။
တို.အမ အီးတုံးတော့ …. တော်တရ်ဟေ့ ~~~
သူများအသက်ကို တန်ဘိုးထားသနားလို. ဘာမှမစားပဲ… ၀ီစကီလေးသောက်ပီးပြန်လာတတ်တရ်။
သာဓု သာဓု …. ဟီး။
နာကြိုက်လို့ကွာ … ဟီးဟီး (ကျော်ဟိန်းလေသံဖြင့်)
ဟုတ်ပ၊ ၀ီချတယ်တယ့်၊ ဒို့များမနည်းမျိုချနေရတုန်း
eros ရေ … ၀ီစကီက ထိန်းသောက်လျှင်မမူးပါဘူး ။ ကြက်ဟင်းခါးသီးလောက်တောင် မခါးပါဘူး ။
အောင်မယေး ယေး၊ ဘီယာနဲ့၊ ၀ိုင်၊ ရှန်ပိန် ပဲ အားရပါးရသောက်နိုင်တယ်။ ၀ီကတော့ မရနိုင်ပါ။ ရှီးဖော် လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဘယ် လို ဘယ် လို????????????
သစ်သီး နဲ့ ဝီ စကီ ကျမ သတ်သတ်လွတ်
သိပ်မရှင်း ဘူး ဟီး
ဟုတ်တယ်လေ … ၀ီစကီသောက်တာ သူများကို ဒုက္ခပေးတာမှမဟုတ်တာ…။ ဘယ်တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ အသက်မှ ၀ီစကီထဲမပါဘူး ။
အသားလည်း မစားဘူး … သောက်ပဲသောက်နေရင် မှောက်သွားမှာ စိုးလို့ အသီးလေးစားလိုက် ၊ စကားလေးပြောလိုက် ၊ ဆက်သောက်လိုက်လုပ်နေတာ ။
ဟုတ်တယ်။ အော်ရီဂျင်နယ် ဘီယာ၊ ၀ိုင်၊ အရက်၊ ၀ီစကီမှာ ဘာကောင်မှမပါဘူး။ ဘီယာ ဘာလီစပါး၊ ၀ိုင် စပျစ်သီး၊ အရက် ဆန်၊ ပြောင်း။
ဟီး အရက် သ မား ပဲ ကြားဖူး တာ အရက် သ မ တော့ ခု မှ တွေ. ဖူးတယ်
သေချာကြည့် သေချာကြည့်ထား ။ မမှတ်မိမှာ စိုးလို့ ။
ဟွန့် တကတည်း မပြောလိုက်ချင်ဘူး …။ ဒါမျိုးသောက်တိုင်း အရက်သမားလို့ ခေါ်စရာလား ။ ရွာသူရွာသားထဲမှာတောင် ဘီယာ၊ ၀ိုင် ၊ ၀ီစကီသောက်တဲံလူတွေအများကြီးပါတယ်။ ဒါဆိုအားလုံး အရက်သမားတွေပဲဖြစ်ကုန်မယ် ။ အရက်သမားဆိုတာ အချိန်ကျရင် သောက်နေရမှ ၊ နေ့တိုင်းမူးအောင်သောက်တယ် … အဲ့ဒါကို ခေါ်တာဟ ။
ဟုတ်တယ်။ တို့ကပွဲရှိလို့ အပျော်သောက်တာ။ လူမှုရေးအရသောက်တာ။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ အသက်ရှင်နေတာကြီးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းသတ်ပြီး ချက်ကြွေးမယ်ဆိုတာကို သိရက်နဲ့တော့ မစားချင်ပါဘူးဗျာ။
ဟုတ်တယ်ကိုခိုင်..ဟိုတလောက သတင်းထဲမှာလည်း ပုံတူ မျိုးပွား တွေ လုပ်မယ်။မလုပ်ဘူး ဆိုတာတွေဖတ်လိုက်ရတယ်။တကယ်တော့ သဘာဝ တရားကြီး ဆန့်ကျင်ရင် နောင်တချိန်မှာ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ခွေး ကို ဟိုးပေါက်စနထဲက အိမ်မှာမွေး တယ် ခွေး ချစ် လို့ မွေး သလိုပဲ သေချာမွေး တယ်
အရွယ် လဲ ရရော သတ်စား တယ်
ကလေး က အ စ လူကြီး အဆုံး တအိမ်သားလုံး အလယ်မှာ ဟင်းအိုးတည်ပြီးတော့
(ပြောရင် ယုံ မလား တော့ မ သိ ဘူးကိုရီးယားက ခွေးတွေ ခွေးသားစားတယ် ဗျ
သားစိမ်းငါးစိမ်းစားတာကတော့ ကလေးပိစိကွေး တွေ က အစ
ကိုရီးယားမှာ ခွေးသား သိပ်ကောင်းတယ် ညနေကျွှေးမယ်တဲ့ မစားချင်ဘူး ၀ိုင်းအော်ကြတော့ နောက်တာ ခွေးသား သိပ်ဈေးကြီးလို့ ဒီမှာ စားချင်တိုင်း မစားရဘူး ၀က်သားဘဲ စားရမှာတဲ့… အေး ငါတို့ ၀က်သားဘဲ စားမယ်လို့ ဖြေကြတယ်။ နင်တို့ လမ်းဘေးမှာ ခွေးတွေ တွေ့လား မတွေ့ဘူး မဟုတ်လား အဲဒါ ငါတို့ဆီမှာ စားလို့ အလေအလွင့်တောင် မရှိဘူးတဲ့။ ဂျပန်ကျတော့လည်း ခွေးများ ကလေးတွန်းလှည်းနဲ့ ထည့်တွန်းနေကြတယ်။ ဒါကျတော့လည်း အမြင်မှာ အတော် လွန်လွန်းတယ်။
ကိုရီးယား က လူပြောပြတဲ့ ငါး အသားလွာ…
သူတို့ဆီမှာ ငါးအသားလွှာကို စားကြတယ် ဂျပန်လိုမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ငါးသိပ်လတ်လွန်းမှ စားကြပါတာ.. ဘယ်လိုများ လတ်သလဲ ဆိုရင်တော့.. ငါး အရှင်တကောင်ကို တူနဲ့ ခေါင်းကိုထုပြီး ငါးအသားကို အရှင် လွာလိုက်ပြီး ပန်ကန်ထဲမှာ နေရာချထားတယ်။ ငါးက ခေါင်းမရှိပေမဲ့ အသက်ရှင်နေသေးတယ်တဲ့.. ငါးက ခေါင်းထု ခံရလို့ မူးပြီး မေ့သွားတာတဲ့.. ငါးအသားလွာ ကို ပန်ကန်မှာ စီပြီး ငါးခေါင်းကို အလယ်မှာ ထောင်ပြီး ချထားပါတယ်။ အဲဒါကို အမြန်ယူသွားပြီး စားမဲ့ လူတွေ ရှေ့ချတဲ့ အချိန်လောက်မှာတော့ မေ့နေတဲ့ ငါးက ပါးစပ် ထလုပ်တယ် အဲဒါ ပြီးရင်တော့ တကယ် သေသွားပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်နိုင်တာကို တော်တော ဂုဏ်ယူပြီး စားတယ် ပြောတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ဟောင်ကောင်က စားသောက်ဆိုင် တခုမှာ အီးတုံး ရေးထားသလိုဘဲ မှန်ကန်ပုံးကြီးထဲမှာ ပုဇွန်တွေ ငါးတွေ ထည့်ထားတယ် လိပ်တွေလည်း ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သတိထားမိတာကတော့ ပုဇွန်တွေက အကြီးကြီးတွေပေါ့။ ကဏန်းလည်းပါတယ် အတော်ကြီးတဲ့ ကဏန်းတွေ သနားစရာ ကောင်းတာက အဲဒီ အကောင်တွေက လက်မကို မလှူပ်နိုင်အောင် ကြိုးနဲ့ တုတ်ထားတယ် ခြေထောက်တွေကတော့ ဖတ်ထားတာ မရှိဘူး တကောင်လုံး လက်မ ၂ချောင်းဘဲ ရှိတယ် ရှိတဲ့ လက်မကလည်း အတုတ်ခံထားရတယ်။
နောက်တခါ ဘယ်မှာလည်း မသိတော့ဘူး တခါ စားသောက်ဆိုင် က အထွက်မှာ ပုဇွန်တွေရဲ့ လက်တွေကို ကတ်ကြေးနဲ့ စိမ်ပြေ နပြေ ညှပ်နေတယ်။
စိတ်ထဲမှာ တောင် တွေးမိသေးတယ်။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. ဒီ အကောင်တွေက ငရဲပြည်မှာ ငရဲထိန်းတွေ နိပ်စက်တာခံရသလို လူပြည်မှာတော့ လူတွေက သူတို့ အတွက် ငရဲထိန်းတွေ ဖြစ်နေပြီလို့.. တွေးမိတယ်။
ကိုကို ၊ မမ၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ် တို့ရေ အဲဒါတွေကမှတော်ဦးမှာ..တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား
တွေထက်သာတာတစ်ခုရှိတယ်.. ဒီနိုင်ငံက လူသားတောင်စားကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပြီးသားလေ..။
အဲဒီတော့ ပို မဆိုးဘူးလား…..။
ဒီကြားထဲ အမေရိကန်ကလူက ရုပ်ရှိပြီး နာမ်မရှိတဲ့ သတ္တဝါတဲ့
နောက်ဆုံး ကို၇ီးယားတွေ ခွေးမွေးပြီးစားတဲ့အကြောင်းကို ရောက်လာပြီဆိုတော့
စားစရာမရှိရင် ယောက္ခမကို ချက်စားတယ်ကွ မှတ်ထား
အောင်ပု တယောက် စားစရာ မရှိရင်တော့ ယောက္ခမတော့ ပတ်ပြေးရမယ် ထင်တယ်။
ငှဲ.. ငှဲ.. ငှဲ.. အချက်စား မခံချင်ရင် ကောင်းကောင်းကျွှေး..
ကျွန်တော်လည်း တနေ့နေ့မှာ သတ်သတ်လွတ်စားမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ဆရာမိုးဟိန်းကို လေးစားတာကတစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ပျော့တယ်၊ ကြွက်တစ်ကောင်တောင် သတ်ရဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကြောင့် တံခါးကြားမှာ အိမ်မြှောင်သေရင်တောင် မသက်မသာဖြစ်တယ်။ ရုပ်တွေနာမ်တွေ ဘာတွေလည်းတော့မသိဘူး။ စိတ်ခံစားချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိမ်လို့မရဘူး။ ကိုယ့်ကြောင့် အကောင်တစ်ကောင်သေရင် တော်တော် ခံရတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျို့၊ ကျုပ်လည်းတရုတ်မားကက်မှာ အရင်ကအသား၊ငါး သွားဝယ်ရင် မှန်ပုံးတွေထဲ အရှင်လတ်လတ်ထည့်ထားတာတွေကို ကြည့်မိတယ်။ သူတို့က အထဲကနေ မျက်နှာသေလေးတွေနဲ့။ ဆေရုံကုတင်ထက်မှာ သေခါနီးလူမမာတွေကို ဘီလူးသဘက်တွေက ဒီလိုပဲ ရွေးနေကြမယ်နဲ့တူ၏။ သဂျီးကိုလည်း သက်သတ်လွတ်စားဖို့ ဝိုင်းနှိုးဆော်ကြပါအုံး။ သူ့ခင်မျာ အယူတိမ်းတဲ့နတ်စိမ်း အရှင်လတ်လတ် ဖြစ်နေရှာတယ်။
သဂျီးမင်းအား ပူဇော်ပါ၏ ပသပါ၏ ပူနောင်ချပ်ခြိမ်း… ပူနောင်ချပ်ခြိမ်း….
ကလေးတို့ေ၇ လာကြ လာကြ ရွာထဲမှာ ကိုကြောင်ကြီး နတ်ကနားပေးနေတယ်
အသိဉာဏ်ပညာ မြင့်မားပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေ လူတွေ….
သတ္တ၀ါ ဆိုတာ လူချွတ်မှ ကျွတ်တာတဲ့။ တဖန် တပါး အသက် မသတ်ကောင်းတဲ့။
ကျုပ် အဒေါ် အပျိုကြီးကတော့ တသက်လုံး သီလရှင်ဝတ်မယ်ဆိုတော့ လေးစားစရာ။ ခက်တာက အိမ်မှာပဲ နေသဗျ။ သက်သက်လွတ် ဘဲဥဟင်းလည်း မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် စားပါရဲ့ ။ ရံဖန်ရံခါ အားနည်း လို့ ဆိုပြီး ခြေလေးချောင်းသား(အသက်ရှိ) ရှောင်ထားလို့ခြေနှစ်ချောင်း (အသက်ရှိ) ကို စွပ်ပေါင်းလဲ လုပ်စားပါရဲ့ ။
ဟိုမှာနေတုံးက ဆူရှိဆိုင်မှာ ရေဘ၀ဲ အရှင်စားဖူးပါရဲ့ ။ ကန်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး ပန်းကန်ပြားထဲကို ကတ်ကြေးနဲ့ညှပ်ပေးတာ။ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်နေလဲ ရွစိထိုး လှုပ်နေတုံးပဲ။ တူနဲ့ ဆွဲတော့ ပန်းကန်မှာ စုပ်ခွက်နဲ့ ကပ်။ ပန်းကန်ပါ မြောက်တက်လာ။ စားတော့လဲ လျှာမှာ ကပ် အာခေါင်မှာ ကပ်နဲ့ ။
၀ါဆာဘီ နဲ့တို့ ပြီးစားတာ အရသာ အရှိသား။
ခွေးက စားခွေး သပ်သပ်ရှိပါတယ်။ ခွေးတိုင်းစားလို့ ကောင်းတာ မဟုတ်ပါ။ ကိုရီးယားမှာ စားခွေးကို သပ်သပ်မွေးပါတယ်။ ဘိုရှမ်ထား(င်) ဆိုတဲ့ ခွေးစွပ်ပေါင်းဟာ အလွန်ကို (ကျား) အား ဖြစ်စေတယ်ဆိုပဲ။
ကျုပ် မွေးနေ့ တုန်းက (21) သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်မှာ ညလုံးပေါက် သောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ဖိတ်ထားလို့ပြည်လမ်းမ (ယခင် လိုင်းပေါက် မှတ်တိုင်အနား) ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးစောင့်နေတုံး အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးပေါက်(အကောင်တော်တော်ကြီးနေပြီ) တစ်ကောင် ဘယ်အိမ်ကနေ ပြေးလာလဲ မသိ လမ်းဖြတ်ကူးပါတယ်။ ကားတစ်စီး အရှိန်နဲ့ အလာ ခွေးသဘာဝအတိုင်း နောက်ပြန်လှည့်ပြေးတော့ ပွတ်တိုက်မိရော။ ကျုပ်က ခွေးချစ်တတ်( ကြိုက်လဲကြိုက်) တော့ သနားပြီး မသေပဲ ကိန်ကိန်အော်နေတဲ့ ခွေးကို သွားကယ်တာပေါ့(Hero)။ ခွေးက နာနေတော့ သေငယ်ဇောနဲ့ကျုပ်လက်ကို အသေခဲရော။ နာလဲနာ ဒေါသလဲ ထွက်တော့ ကိုက်လျက်သားကို ဆွဲခေါ်လာ ပြီး ပလက်ဖောင်းနဲ့ရိုက်သက်လိုက်တာ ကားတိုက်လို့မသေ ကျုပ် ရိုက်လို့ သေရော။
(သတ္တ၀ါ နိုပ်စက်မှုနဲ့တရားစွဲခံရမလားမသိ)
ဒါနဲ့သူငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ ခြံထဲမှာ ပေါ်ကြတာပေါ့။ အမြည်း တမယ် တိုးလာအောင်လို့ရှိရှိသမျှ ဟင်းခတ် အမွေး အကြိုင် ပေါင်းစုံ ထည့်ပြီးချက်လဲ ပြင်းလိုက်တဲ့ ခွေးနံ့ဘယ်လိုမှ မပျောက်။ နောက်ဆုံး ရေခဲခန်းထဲ ထည့်ထားပြီး နောက်တနေ့မနက်မှာ ဈေးကနေ ငရုပ်သီး ခွဲခြမ်း ကြက်သွန် နီဖြူ စတာတွေ ၀ယ်ပြီး ခွေးသားကို အတုံး သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင်တုံးပြီ ဘာလချောင် ဖြစ်အောင် ကြော်လှော်။ ပြီးတော့ Holic ပုလင်းတွေထဲ ထည့်ပြီး ရှိသမျှ အမျိုးတွေကို တောက သူငယ်ချင်း ပေးတဲ့ ဂျီသားကြော်ဆိုပြီး ဝေပေးလိုက်တာ ကြိုက်ကြလွန်းလို့ရှိသေးရင် နဲနဲ ပေးပါဆိုပဲ။
တကယ်တော့ လူ့ စိတ်ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ခြေနှစ်ချောင်းတို့ခြေလေးချောင်းတို့ ဆိုတာတွေလဲ လူတွေကပဲ အမျိုးမျိုး ရှဉ့်လျှောက်သာ ပျားစွဲသာ လက်တလုံးခြား လုပ်နေကြတာပါ။
ကိုး ရီးယား တွေလား ခွေးစုတ်ဖွားလေး တွေမစားဘူး(သေးလို့)
အယ်ဇေးရှင်း တို့ ဒိုဘာမန် တို့ လို အကောင်ကြီးတွေမစားဘူး(ွ ဈေးကြီးလို့)
ရိုးရိုး အိမ်ခွေး ဆို အကုန်စားတယ်
ထမင်းဂျိုး နဲ့ ချဉ် ဖတ် စားလဲကိုရီး ယား တွေ ကျား အားကောင်း တယ် ဆိုပြီး လက်သီးလက်မောင်း တန်း နေရေားP
ရေဘဝဲ အ သေး စား ကို အရှင် ဖမ်း တူနဲ့ ညှပ် ငရုပ်ဆီ တို့စား ဒါလဲ ကျား အားကောင်းတယ်တဲ့
နေမကောင်းလို့ လဲ နေတဲ့ နွားတောင် အဒီ ရေဘဝဲအရှင် ဖမ်း ပါးစပ်ထဲထည့် ဗိုက်ထဲရောက်ရင် အဲဒီနွား ငုတ်တုပ် ထထိုင်သွားမယ်တဲ့ ညွှန်းတာ
အားရှိလို့ ငုတ်တုတ် ထထိုင်တာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ဗိုက်ထဲရောက် ဟိုကပ် ဒီကပ် လုပ်တော့ လန့်ပြီးထထိုင် တာပဲနေမယ်
ခင်ဗျားတို့ နဲ့ ကျုပ်နဲ့ မသိမသာ လိုင်းကွဲတယ်ဗျို့ 
ကုန်းမှာ ကုတင် (ခြေလေးချောင်း)
လေထဲမှာ လေယာဉ်ပျံ ( ပျံတတ်တဲ့သတ္တဝါ )
ခြေနှစ်ချောင်းအနေနဲ့လှေကား ကို ကျုပ်မစားဘူး
သားကြီးငါးကြီးအနေနဲ့ဂေါ်ဇီလာအသားကိုတော့ ထာဝရရှောင်တယ်
ဘကြီးပု မစားတဲ့ အသီး တခု ရှိသေးတယ် မလား.. (မီးသီး)
စားတဲ့သူတွေရှိနေတော့လည်း ရောင်းတဲ့သူတွေ ရောင်းနေကြတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ ဒီလိုလုပ်ပြီး မှာစားမှ လတ်ဆတ်တယ်လို့ ထင်နေကြတာကိုး။ အဲလိုဆိုင်တွေ ဒုနဲ့ဒေး ပေါ်ပေါက်လာတာပဲဟာ။ မနောကတော့ ပင်လယ်စာ စားရင် ဘုတွေ ဘိန့်တွေ ထွက်လာလို့ မစားဘူး။ နောက် အများအားဖြင့် အသီးအရွက်ပဲ စားဖြစ်တယ်။ ညီးတာတွေလည်းစားလို့မရဘူး။
ပိစိကွေးလည်းတပတ်မှာ5ရက်သတ်သတ်လွတ်စားတယ်………. စားနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်………. အသားအရည်ကြည်လင်လာတယ်…….
အန်တီယု………. ဦးကြောင်ကြီးက နတ်ကန္ဒာမှာ ပိုက်ဆံကြဲမှာလားဟင်……
ှုဦးကြောင်ကြီး ပေးတဲ့ နတ်ကန္နားပွဲမှာ နတ်ကတော် ခေါင်းက ဘယ်သူလဲဟင်။
အစားအသောက်အကြောင်းပြောပြိး သူ ရှပ်ကီ ပိတ်တာ ကြွားသွားသေးတယ် ပြိုင်တောင်သောက်လိုက်ချင်သေးတယ်
သတ် သတ် လွတ်လား သက် သတ် လွတ်လား သား သက် လွတ်လား သား သတ် လွတ်လား
သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်တယ်လို့ မှတ်ဖူးတယ်..။
ဟိန္ဒူအယူကလာတာပါ..။ အစွန်းရောက်.. အရှိန်လွန်သွားရင်.. မီးလွတ်တောင်ဖြစ်ကုန်တာရှိတယ်..။
သက်သတ်လွတ်က … ရှေးခေတ်က .. မိုဒယ်အောက်နေတဲ့..အယူအဆနဲ့စကားထင်တာပါပဲ..။
လောကမှာ .. အသက်ရှိတဲ့အကောင်တွေ ..သတ္တ၀ါတွေ..မမြင်ရပေမဲ့..မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်..။
အဲဒါ ..ဘိုလို ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိ..။
လေယဉ်ပေါ်မှာတော့ ဗက်ဂျီတေးရီယန်း လုပ်ချလိုက်ရင်… သူများတွေထက်အရင် ..ဦးစားပေးလာချပေးတာတော့ သတိထားမိတယ်..။
ဒါမှမဟုတ်.. ဆူးမမပြောသလို ..သားသတ်လွတ် ကပိုမှန်မယ်ထင်တယ်..။
ဒါပေမဲ့..အသက်ကို..သွယ်ဝိုက်ထည့်ပြောနေရင် မပြည့်စုံတာတော့အမှန်ပဲ..။ အသီးအရွက်မှာ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းထားရင်ကို .. သတ္တ၀ါအသက်သတ်ထားတာ..ဒါမှမဟုတ်.. သတ်နေတာဖြစ်ဦးမှာမို့ ပါ…။
ဒါတွေကို သိသိကြီးနဲ့.. သက်သတ်လွတ်လုပ်နေ..ပြောနေရင်.. မုသာဝါဒါကံထိုက်မှာတော့ အသေအချာဖြစ်ပါကြောင်း..
(ကိုကြောင်ကြီး နတ်ပွဲပေးရင်…အသုံးတည့်မဲ နတ်ဒိုးလေးထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါကြောင်း…)
ဆူး ကတော့ သားသတ်လွတ် လို့ တွေးပါတယ်။
ဈေးကတော့ ၀ယ်စားတယ်။ အသေသားပေါ့။ အသီးအရွက်စားရတာ ကြိုက်တယ် တခါတလေ အသီးအရွက်တွေက လည်း စားရတာ စိတ်ပျက်တယ် ပိုးသတ်ဆေး ပြသနာ တွေ အသီး အမြန်မှည့်တာတွေ ဆေးနဲ့ လုပ်တာ ကြားနေရလို့ ဘာစားရမှန်း မသိတော့ဘူး။
ကိုယ့်ဖာသာကိုစိုက်စားပေါ့ချူးမရဲ့ ။ နေ၀န်းနီရဲ့ ရွာလေးမှာလာနေလေ……….
ဒီနေရာမှာ ..ပြောစရာတခုတော့ ရှိတယ်..။
သတ္တ၀ါကို ..မသတ်ခင်ငြင်းဆဲတာမျိုးတော့ မလုပ်ကောင်းဘူး..။
အဲဒီလိုပဲ.. အရှင်လတ်လတ်..လက်ညိုးထိုး…လူသူရှေ့ ခုတ်ထစ်စားသောက်တာမျိုးလဲ..မသင့်တော်ဘူး..။
ဒါကို ကလေးလူငယ်တွေတွေ့သိရင်.. ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ရိုင်းဝင်သွားမှာမို့ ဖြစ်ပါတယ်..။
သူတို့ကြီးလာရင်.. ဒါမျိုးတွေက.. ရောင်ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်..။
(သားသတ်သမား ..သားသမီး .. အရွယ်ရောက်ရင်.. လူသတ်မှုရာဇ၀တ်မှုတွေပိုလုပ်တတ်တာများတယ်ဆိုတဲ့.. စံနစ်တကျလေ့လာထားတဲ့..ဆာဗေးတွရဲ့.. ရလဒ်ကနေ သိကြတာတွေပါ..။)
တိရစ္ဆာန်အရှင်တွေကို သတ်တယ်ဆိုလို့ အသိတယောက် ပြောဖူးတယ်။ နွားသတ်ရုံမှာ အဖေလုပ်သူက ဆယ်နှစ်ကျော် ခလေးသာသာလောက်ရှိတဲ့သားကို ကြီးလာရင် နွားသတ်သမားအလုပ်နဲ့ မစိမ်းအောင်ဆိုပြီး ကျောင်းမထားဘဲ နွားသတ်ရုံမှာ ခေါ်ထားတယ်။ ကောင်လေးက ဘယ်လောက် ယဉ်ပါးနေပြီလဲဆိုရင် ရုန်းမရအောင် ငုတ်တိုင်နှစ်ခုကြား ခေါင်းထည့်ထားတဲ့ သတ်တော့မဲ့ နွားအရှင်ရဲ့ လည်ပင်းကို သားလှီးဒါးနဲ့ ထိုးကစားသတဲ့။ အတန်းပညာလည်းမတတ်၊ သူများမလုပ်ရဲတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တော့ ငွေကလည်းရွှင်၊ အယူဝါဒကလည်း အစွန်းရောက်၊ အင်း.. ဆက်ပြောရင် ဘာသာရေး ပါကုန်တော့မယ်။
နောက်တယောက်ကြတော့ ဝက်သတ်သမား၊ တွေ့ကံပါလို့ တွေ့ခဲ့ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတယ်။ ဝက်သတ်တာ ဝက်ရဲ့လက်ပတ်ကြားကို လှံနဲ့ထိုးသတ်တယ်ပြောတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အဆုပ်ဆိုလား နှလုံးဆိုလား ရှိတယ်တဲ့။ ချက်ခြင်းမသေဘူး၊ ဝက်က တခွီးခွီးနဲ့ နာနာကျင်ကျင် အော်ပြီးမှသေတယ်။ ဆင်မလိုက် ဝက်သတ်ရုံမှာ ဘယ်လိုသတ်ခဲ့လဲတော့ မသိဘူး။ ကျနော်သူနဲ့သိစဉ်က သူသတ်ရတဲ့ အနေအထားကို ပြောပြတာ စင်လိုအမြင့်ခုံမှာရပ်ပြီး လှည့်ပတ်ပြေးနေတဲ့ ဝက်တွေထဲက စိတ်ကြိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကောင်မျိုးကို လှမ်းပစ်ထဲ့တာတဲ့။ တခါမှမလွဲပစ်နိုင်တယ်ပြောတာပဲ။ ဆင်မလိုက်မှာ ဝက်ပေါ်ရင် မနက်အစောကြီးသွားရတယ်တဲ့။ ခိုးပုံခိုးနည်းလည်းပြောပြတယ်။ တီရှပ်လိုမျိုးအတွင်းခံနဲ့ အပြင်အင်္ဂျာီအကြားမှာ ပလပ်စတစ်အိတ်လိုမျိုး ခံထားတယ်။ ဝက်ပေါ်ပြီး အသားဖျက်တဲ့အခါ အတွင်းအူကလီစာ အတွဲလိုက်ကို ပိုင်ရှင်အလစ်မှာ အပေါ်မြောက်ပစ်ထည့်ပြီး နောက်ကြောဖက်က ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲကို ထည့်တယ်ပြောတယ်။ လက်ကတော့ ဘာယဉ်သလဲမမေးနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့ကတော့ ဒါးနဲ့ထိုးပြီးသားပဲ။ ကိစ္စရှိရင် လာခေါ်ဖို့ ပြောသေးတယ်။ လမ်းကြုံလို့ သူလိပ်စာအတိုင်းသွားတယ်၊ ဝတ်ကောင်းစားလှဝတ်ထားတော့ တစိမ်းမှတ်လို့ သူကမီးကင်းတဲပေါ်ကနေ ဘုကြည့်ကြည့်လို့။ ဘယ်ကကောင်တွေ နယ်ကျွံလာသလဲပေါ့။ တော်သေးတယ် မှတ်မှိပေလို့၊ နို့မို့ရင် အသက်ဘယ်က ထွက်ရမှန်း သိမှာမဟုတ်ဘူး။
ဘကြီးပု မစားတဲ့အရွက်ရှိသေးတယ် အန်တီဆူးရဲ့ အဲ့ဒါ စာရွက်လေ…….
ဦးနီနော်…. အန်တီဆူးကို သွယ်ဝှိုက်ပြီး ….. စကားတွေပြောနေတယ် ….. ဟိ ဟိ
(နေ၀န်းနီရဲ့ ရွာလေးမှာလာနေလေ………. :P) တဲ့……….
အဘနီ ရွာတော့ မသွားရဲပေါင် လက်ညိုးညွန်ရင် ရေဖြစ်တဲ့ ခေတ်မှာ အဘနီ ရေမျောတဲ့ အထဲမှာ ဆူး ပါသွားလိမ့်မယ်။
ကျုပ်တော့ဗျာ စက်ရုံနောက်မှာမွေးထားတဲ့ ယုန်လေးတွေကိုလာဆွဲတဲ့ခွေးရိုက်သတ်ပြီး အမွှေးမီးမြှိုက်ပြီးရုံရှိသေးပိုင်ရှင်ကိုရီးယားလင်မယားက သူတို့်လမ်းလျှောက်ရင်းလိုက်လာတဲ့သူတို့်ခွေးပါတဲ့ ပြန်ပေးပါဆိုလို့စားရခါနီးမှပြန်ပေးလိုက်ရတယ်၊ပေါင်၂ ချောင်းလောက်ဖြတ်ယူထားလိုက်မယ်ဆိုတာမရဘူး၊တွန့်တိုတာကြည့်။
အောင်မလေးလေး နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်တယ် ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လိုက်ကြတာ ။
စားသုံးသူရှိလို့ရောင်းချသူရှိ။
ရောင်းချသူရှိလို့သားသတ်သမားတွေရှိ။
သူများသတ်ပြီးသားကို ဈေးက ၀ယ်စားလည်း အားပေးအားမြှောက် စာရင်းဝင်တာ။
စားသုံးသူ မရှိလျင် ရောင်းချသူ သားသတ်သူလဲ မရှိပါ။ နားထောင်ကောင်း လူကြည်ညိုအောင် အချို့ က ဈေးမှ အသေသား ၀ယ်စားသည်ဟု ဆိုကြသည်။
လူဆိုသည်မှာ အသားစား သတ္တဝါ ဖြစ်သည့် အလျောက် အသီးအရွက်ပဲ စားပြီး ခွန်အား မရှိနိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့အဟာရတန်ဖိုးထက် လျှာအရသာကို ဦးစားပေးသော စားသောက်မှုပုံစံ ဂေဟတွင် အသီးအရွက်ပဲ စားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအား ထိုက်သင့်သလောက် မရရှိနိုင်ပါ။ ခံယူချက် တချို့ ကိုက အသားမစားပဲ အသီးအရွက် အနှံ စားခြင်းဖြင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထူးခြားမှု အိမ်မက်ရလာဒ်အား အမှီပြုနေသည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော သားငါး အသီးအနှံအရွက်တို့ အား အချိုးကျ စားသုံးခြင်းဖြင့်သာ ကျန်းမာသုခအားရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရား အသားလွတ်စားပါဟု အားမပေးပါ။ အသားစားပါဟုလဲ မပြောပါ။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အဟာရကို ရရန် အတွက် လူတို့ သည် အသားဓါတ်အား စားသုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။
လက်တွေ့ လူ့ သဘာဝ လူလောကသည် လက်တွေ့ ကျသည့် အရာကို လက်ခံနိုင်မှသာလျင် တိုးတက်သည့် အဖြစ်အား ရရှိနိုင်သည်။
အမြင် မတူသူများ ကျိုးကြောင်းပြပြီး ကန့် ကွက်နိုင်သည်။
ဒီပို့စ်တစ်ခုထဲနဲ့ ၀င်ငွေတော်တော်ကောင်းတယ် …။ တစ်ယောက်တစ်ဆယ်စီယူနေကြတာ အများကြီးပဲ